Politika momba ny tsiambaratelo | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Afaho i Broadcast - Politika Fiarovana Fiainana
Ny fiainanao manokana dia manan-danja ho anay, noho izany dia namolavola tambajotra tsy miankina iray izay ahitana ny fampahalalana manan-danja toy ny hoe iza izahay, ahoana ary nahoana izahay no manangona ny mombamomba anao manokana, ary ny fomba fampiasanay sy itehirizana ity vaovao ity, ao anatin'izany ny fifandraisanao ary mampiasa ny tranokalantsika sy ny fampiharana (apps). Manontany izahay fa mamaky azy io amim-pitandremana ianao rehefa misy fampahalalana manan-danja ary manazava ny fomba hifandraisana aminay raha misy fanontaniana. Tsarovy koa fa amin'ny alalan'ny fampiasana ny serivisinay, dia mihevitra izahay fa faly ho anay ny manova ny mombamomba anao manokana araka ny voalaza ato amin'ity Politique ity.
Mankasitraka anao izahay manaraka ny vaovao sy ny vaovao omenay ny indostria ary dinihinay ny fampahalalam-baovao mahasarika anao. Ny tanjonay dia ny hiantohana fa ny fiarovana anay dia voaro ary voatahiry ny tsiambaratelonao. Ankoatr'izany, rehefa mijery ny tranonkalan'ny tranonkalanay ianao, dia manara-maso izany ho an'ny tontolon'ny zava-baovao toy ny fanandramana vaovao, fanatanjahan-tena sy lohahevitra mahaliana anao. Hahazo fampahalalana izay omenareo an-tsitrapo ihany koa izahay; ohatra, mailaka fifandraisana, fanolorana fandaharana, fanadihadiana mifandraika amin'ny fandaharana amin'ny fampisehoana indostrialy, fangatahana fanadihadiana, taratasy fotsy, tranonkala sy fifaninanana.
Ny zo tokony hampahafantarina - Manana zo hampahafantarina momba ny angona manokana angoninay aminao ianao, ary ny fomba amoanay azy.
Ny zo hahazo alàlana - Manan-jo hahazo fanamafisana ianao fa ny tatitra manokana ataonao dia alaina ary manana fahafahana miditra amin'ny mombamomba anao manokana.
Zo ny fanitsiana - Manan-jo hanitsy ny angon-drakitrao manokana ianao raha toa ka diso na tsy feno izany.
Ny zo hanafoana (azo atao ny manadino) - Manan-jo hangataka ny fanesorana na famafana ny angona manokana ianao raha toa ka tsy misy antony manan-danja hanohizana ny fanitsiana azy.
Ny zo hamerana ny fikarakarana - Manan-jo hanakatona ianao na hametra ny fanodikodinanao manokana. Rehefa voafetra ny angona misy anao, dia avelanay ny hitazona ny angon-drakitrao, fa tsy hanatsara azy bebe kokoa.
Ny zò manan-danja - Manan-jo hanakana antsika tsy hanaraka ny angon-drakitrao manokana ianao noho ireto antony manaraka ireto: Ny fikarakarana dia mifototra amin'ny tombontsoa ara-drariny na ny fanaovana asa iray amin'ny tombontsoam-bahoaka / fampiharana fahefana manam-pahefana (tafiditra amin'izany ny profiling); Fivarotana mivantana (tafiditra amin'izany ny profiling); ary ny fizotran'ny fikarohana sy ny antontan'isa ara-tsiantifika sy ara-tantara. Ny zo mifandraika amin'ny fanapahan-kevitra fanapahan-kevitra sy famolavolana.
Ny fanapariahana ny fanapahan-kevitra sy ny famolavolana ny tsirairay - Hahazo ny zo tsy hanaiky fanapahan-kevitra mifototra amin'ny fanodinana maoderina ianao, anisan'izany ny profiling, izay miteraka vokatra ara-dalàna momba anao na koa misy fiantraikany eo aminao.
Mampiasa cookies izahay mba hanampy anao hivezivezy amin'ny tranonkala Broadcast Beat araka izay tratra, ary hahatsiaro ny vaovao momba ny fotoam-pivoriana misy anao. Tsy mampiasa an'ity teknolojia ity izahay mba hitsikilo anao na hiditra amin'ny fiainanao manokana. Azonao atao ny manala ny cookies sy ny fitsikilovana amin'ny alalan'ny tranonkalanao.
Ny tranonkala Broadcast Beat dia manana fepetra fiarovan-tena mahaleotena manerantany mba hiarovana ny fahavoazana, ny fampiasana diso ary ny fanovana ny vaovao eo ambany fifehezantsika. Na dia tsy misy "fiarovana tonga lafatra" aza ao amin'ny Internet, dia handray fepetra marim-pototra izahay mba hiantohana ny fiarovana ny mombamomba anao.
Ny fanitsiana ity fanambarana ity dia halefa amin'ity URL ity ary hahomby amin'ny famoahana azy. Ny fampiasanao tsy tapaka ity tranokala ity aorian'ny famoahana ny fanitsiana, fanovana, na fanovana dia mamaritra ny fanekena ny fanitsiana. Hanamarina anao izahay momba ny fanovana lehibe amin'ny alàlan'ny fanandevozana ny tompon'ny kaonty na amin'ny fametrahana fampahalalana malaza ao amin'ny tranokalanay. Raha manana fanontaniana ianao mikasika ity fanambarana manokana momba ny fiainana manokana ity na ny fifandraisanao amin'ny Broadcast Beat, afaka mifandray aminay ianao [mailaka voaaro].